စီးပွားရေးအကွက်မြင်ပြီး အရည်အချင်းရှိလွန်းတဲ့ စီနီယာအစ်မ စမိုင်းလ်ရဲ့ လုပ်ငန်းသစ်အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလာတဲ့ ဖွေးဖွေး - Cele Connections
စီးပွားရေးအကွက်မြင်ပြီး အရည်အချင်းရှိလွန်းတဲ့ စီနီယာအစ်မ စမိုင်းလ်ရဲ့ လုပ်ငန်းသစ်အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလာတဲ့ ဖွေးဖွေး
bilie | 21/10/2020 | Celebrity | No Comments
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးလေး ဖွေးဖွေးကတော့ အနုပညာသက်တမ်း (၁၃) နှစ်ကျော်မှာ ကောင်းသတင်းတွေနဲ့သာ ကျော်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအပေါ် လေးစားမှုရှိသလို အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်း ကြီးသူကိုရိုသေ၊ ငယ်သူကို လေးစားတတ်တဲ့ ဖွေးဖွေးကို မချစ်တဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဖွေးဖွေးကလည်း ကျော်ကြားမှုဂုဏ်သတင်းတွေထက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုသာ ပိုမိုမက်မောသူလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ဖွေးဖွေးက သူမရဲ့ စီနီယာအစ်မဖြစ်တဲ့ စမိုင်းလ်ရဲ့ လုပ်ငန်းအသစ်အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်း သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားလာပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက “Wowww!🙂🙂🙂😃😄🧡 That’s Very thoughtful of you Ama Smile! ရုပ်ရှင်ရုံ​တွေမှာ ရီရတဲ့ အရသာ ကိုအ​တော်လွမ်း​နေတာ! Big Big Congrats for “Smile” အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ရုံ! Big Big Congrats for your new movie “ဂယက်​တွေပါဟယ်” ! 🤘🤘🤘 whoop! Whoop! 🎬📽🎭 Me Can’t live inaworld without comedy” ဆိုပြီး ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စမိုင်းလ်ကတော့ သူမရဲ့ နာမည်နဲ့ “Smile” အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ရုံဆိုတဲ့ Application အသစ်ကနေ ပရိသတ်တွေသာမက အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Phway Phway’s fb
စီးပှားရေးအကှကျမွငျပွီး အရညျအခငျြးရှိလှနျးတဲ့ စီနီယာအဈမ စမိုငျးလျရဲ့ လုပျငနျးသဈအတှကျ ဝမျးသာဂုဏျယူကွောငျးပွောလာတဲ့ ဖှေးဖှေး
နိုငျငံကြျော မငျးသမီးလေး ဖှေးဖှေးကတော့ အနုပညာသကျတမျး (၁၃) နှဈကြျောမှာ ကောငျးသတငျးတှနေဲ့သာ ကြျောကွားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေပျေါ လေးစားမှုရှိသလို အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးမှာလညျး ကွီးသူကိုရိုသေ၊ ငယျသူကို လေးစားတတျတဲ့ ဖှေးဖှေးကို မခဈြတဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောကျပါပဲ။ ဖှေးဖှေးကလညျး ကြျောကွားမှုဂုဏျသတငျးတှထေကျ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေိုသာ ပိုမိုမကျမောသူလေးတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ဖှေးဖှေးက သူမရဲ့ စီနီယာအဈမဖွဈတဲ့ စမိုငျးလျရဲ့ လုပျငနျးအသဈအတှကျ ဝမျးသာဂုဏျယူကွောငျး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားလာပါတယျ။ ဖှေးဖှေးက “Wowww!🙂🙂🙂😃😄🧡 That’s Very thoughtful of you Ama Smile! ရုပျရှငျရုံတှမှော ရီရတဲ့ အရသာ ကိုအတျောလှမျးနတော! Big Big Congrats for “Smile” အှနျလိုငျးရုပျရှငျရုံ! Big Big Congrats for your new movie “ဂယကျတှပေါဟယျ” ! 🤘🤘🤘 whoop! Whoop! 🎬📽🎭 Me Can’t live inaworld without comedy” ဆိုပွီး ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
စမိုငျးလျကတော့ သူမရဲ့ နာမညျနဲ့ “Smile” အှနျလိုငျးရုပျရှငျရုံဆိုတဲ့ Application အသဈကနေ ပရိသတျတှသောမက အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးတဈခုလုံးအတှကျ အကြိုးရှိစမေယျ့ လုပျငနျးသဈတဈခုကို တညျထောငျနိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
နှစ်စဉ် လွတ်လပ်ရေးနေ့တိုင်း အလှူအတန်းတွေကို ပြုလုပ်ဖြစ်တဲ့ အမှတ်တရတွေကို သတိရအောက်မေ့စွာနဲ့ ပြောပြလာတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
ကိုဗစ်အတွက် လိုအပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့ အွန်လိုင်းမှာ အလှူခံရင်း (၂၄) နာရီမပြည့်တဲ့အချိန်မှာတင် အလှူငွေ သိန်း (၉၀၀) ကျော်ရရှိခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေရဲ့ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်း
အင်ယားစင်တာအတွက် အလှူငွေ သိန်း (၅၀) လှူဒါန်းပေးပြီး Covid-19 လူနာများကို နှုတ်ဆက်အားပေးစကားပြောခဲ့ကြတဲ့ လေးဖြူ ၊ မျိုးကြီးနှင့် Iron Cross အဖွဲ့
သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး -စ်-မ်းဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေ လိုက်ပို့နေတာကြောင့် သေသေချာချာ သတိပေးလာတဲ့ မိစန္ဒီ
နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ပရိသတ်အတွက် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုသစ်တွေကိုချပြနိုင်ဖို့ အတူတူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ နေတိုးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံးသတင်းဝဘ်ဆိုဒ်မှာ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေနှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြခံနေရတဲ့ ပိုင်တံခွန်
ဇနီးမယားအပေါ်တာဝန်ကျေတဲ့အပြင် အိမ်ထောင့်တာဝန်တွေကိုပါ ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ချစ်ခင်ပွန်းရွှေထူးအကြောင်း ပရိသတ်တွေကိုပြသလာတဲ့ ရွှေမှုံရတီ
အပြစ်ရယ်လို့ ရှာစရာမရှိအောင် အဖက်ဖက်က ပြီးပြည့်စုံပြီး တူလိုသားလိုချစ်ရတဲ့ ထွန်းကိုကိုအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလာတဲ့ ကျော်သူ
Online Shop လုပ်ပြီးဈေးမရောင်းရလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သမီးတွေကို မုသားသုံးပြီး ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ညိုမင်းလွင်
လတ်တလောရေပန်းစားနေတဲ့ Tricky Challenge ဂိမ်းလေးကို ပိုင်တံခွန်နဲ့အတူတူ ချစ်စရာကောင်းစွာဆော့ကစားခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယို
© 2021 Cele Connections.